အား….ခေါင်းတွေကိုက်လိုက်တာ….မခံမရပ်နိုင်အောင်ပါပဲ….။ မခံနိုင်တာတောင် အိပ်စက်အနားယူဖို့ မစဉ်းစစားဘဲ စာရေးဖို့ စာဖတ်ဖို့ပဲ စိတ်စောနေမိတယ်….။ သေတ္တာဖွင့် ဟိုစာအုပ်ရှာ ဒီစာအုပ်ရှာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အက်ဆေးတချို့ကို ရွေးချယ်ယူဖတ်လိုက်တယ်…။ နားထင်ဆီက သွေးကြောမျှင်တွေက စောင့်စောင့်ပြီးထိုးနေတယ်…။ အဲဒီချိန်မှာ သူ့ကို ချက်ချင်း သတိရလွမ်းဆွတ်သွားတယ်…။ ခုလို ကိုယ်ခေါင်းကိုက်နေချိန် သူကိုယ့်နားထင်ကို ညင်သာစွာ နှိပ်ပေးမှာ သေချာတယ်…။ ဒီနေရာမှာသေချာတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် လက်တွေ့မဆန်လှပါဘူး…။ ကိုယ်နဲ့သူ စကားပြောတဲ့အခါမျိုး ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေညောင်းညာရင် သူနှိပ်ပေးနေကျ….ကိုယ်ခေါင်းကိုက်ရင်လဲ သူနှိပ်ပေးနေကျလေ….။ လေအေးစက်တွေက သိပ်အေးလွန်းတဲ့အခါ သူဟာ ကိုယ့်အတွက်နွေးထွေးစေတဲ့ ခြုံစောင်တစ်ထည်လဲဖြစ်သေးတယ်…။ ကိုယ့်ကိုအအေးနဲ့မတည့်မှန်းသိလျက်နဲ့လဲ ဘာကြောင့် အကျီင်္လက်ရှည်ဝတ်မထားလဲ ဘာလို့ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ပဲနေနေလဲ စသဖြင့် ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ့်ကို အမြဲတမ်း နွေးထွေးလှိုက်လှဲတဲ့ စကားမျိုးကိုသာ ဆိုလေ့ရှိတယ်…။
တကယ်ဆို ကိုယ့်ကမ္ဘာထဲကို သူရောက်လာခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး…။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်မွေးနေ့မတိုင်ခင် တစ်လအလိုလောက်ကပါ…။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်းလေးပါပဲ…။ ဘာမှတော့ အထူးအဆန်းမဟုတ်ဘူး…။ သမာရိုးကျဆန်ပါတယ်…။ သာယာကြည်လင်တဲ့ မိုးကောင်ကင်ပြာပြာအောက်မှာ… သဲသောင်ပြင်နဲ့ စည်းချက်ရိုက်နေတဲ့ ရေလှိုင်းဖွေးဖွေးတွေထဲမှာ…. ချိုမြမြ ရှိန်းတိန်းတိန်းရှိလှတဲ့ အုန်းသီးနုနုထဲမှာ…. သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ဂီတသံစဉ်များကြားမှာ…နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်နောက်ခံနဲ့ မီးရှုးမီပန်းတွေကြားမှာ ယုန်ဖြူကလေးတွေ ပြေးဆော့ကစားနေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ကိုယ်တို့ရဲ့ ဆုံတွေ့မှုတွေ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့တယ်….။
အဖြူရောင်တွေချည်း အုပ်မိုးလွှမ်းခြုံထားတဲ့ ကိုယ်တို့ကြားမှာ သိုးမည်းတစ်ကောင်လည်းမပါဝင်ဘူး…။ မိုးခါးရေကို မက်မောသောက်သုံးသူတွေလည်းမပါဝင်ဘူး…။ ကိုယ်တို့ကို ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မယ့် မျက်လုံးတွေလဲ မပါဝင်ဘူး…။ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေမယ့်သူလဲမပါဝင်ဘူး….။ အိန်ဂျယ်ရဲ့ အတောင်ပံခတ်သံအောက်မှာ ကိုယ်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာ အမြဲအတူရှိနေကြမယ်နော်…။ ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေလို့ မိုးတွေဖွေးဖွေးရွာသွန်း နှင်းထုတွေ မှုန်မှိုင်း ရာသီစက်ဝိုင်းတွေ အလီလီပြောင်းလဲတိုင်း ကိုယ်တို့အမြဲအတူရှိနေကြမယ်နော်…။ ကမ်းစပ်ကနေ နေ၀င်ချိန်ကို အတူထိုင်ကြည့်ကြမယ်လေ…။ တံတားဘောင်ပေါ်ကနေ တိမ်တွေ သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရွေ့လျားနေတာကို စောင့်ကြည့်ကြမယ်လေ…။ တောင်ကျရေရဲ့ နရီရိုက်သံကို အတူနားထောင်ကြမယ်…။ ငှက်ဖြူတွေပျံသန်းရာနောက် ကိုယ်တို့ လိုက်ကြမယ်လေ…ဟုတ်လား….။
Posted by coral nyo at 06:48
တောင်ကျရေရဲ့ နရီရိုက်သံ ဆိုတာ ဘယ်လို အသံမျိုးကို ပြောတာလဲဗျ
တောင်ကျရေရဲ့ နရီရိုက်သံကိုကြားဖူးချင်ရင် ရေတံခွန်တစ်နေရာကိုရောက်ရင် ဘယ်လိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြမယ်...။ အဲဒါပြောပြလို့မရဘူး နားထောင်ခံစားရမှာလေ...။
နရီရိုက်သံဆိုတာ ခုနကကြားလိုက်တဲ့ အသံလိုပဲထင်တယ်..(ဟုတ်လား) :P
“တောင်ကျရေရဲ့ နရီရိုက်သံကို အတူနားထောင်ကြမယ်…။ ငှက်ဖြူတွေပျံသန်းရာနောက် ကိုယ်တို့ လိုက်ကြမယ်လေ…”
ဆုတောင်းလေးတွေ စိတ်ကူးလေးတွေ အမြန်ပြည့်နိုင်ပါစေဗျာ...